MAHAJANGA : Naaton’ny ben’ny tanàna ny asa fanotorana tsy ara-dalàna eny Manapatanana
Manahy ny mety ho fiantraikan’ny fahasimban’ny tontolo iainana ny amin’ny fanorenana tsy ara-dalàna eny amin’ny faritra Manapatanana iAndriatomanga Mokhtar Salim. 2 novembre 2017
Nidina ifotony nanome baiko ny hanajanonana avy hatrany ny asa fanotorana etsy amin’ny tany malalak’i Manapatanana toerana mihazo ny lalana mankany Amborovy ny ekipan’ny ben’ny tanàna, ny antoandron’ny talata 31 oktobra 2017. Toerana tsy azo anorenana trano ny tany malalaka ny sirasira eny Manapatanana saingy misy minia manangana fotodrafitrasa goavambe ihany.
Raha vantany vao nanomboka ny fanamboarana ny fefy teny an-toerana dia efa tonga ny ekipa nalefan’ny ben’ny tanàna nanajanona ny asa tamin’izany. Fandrahonana anefa no nasetrin’ireo olona tompon’andraikitra mikarakara ilay tany tamin’izany fotoana.
Nefa na ny taratasy fahazoan-dalana hanorina trano na karazana fotodrafitrasa na ny fahazoana alalana hanototra aza tsy ananan’izy ireo akory. Nitory araka izany ny avy ao anivon’ny kaominina ambonivohitra Mahajanga satria tsy azo atao velively ny manototra ny velaran-tany izay misy ireo honko eny amin’ny faritra Manapatanana. Teo am-piandrasana ny taratasy fandravana avy any amin’ny Fitsarana anefa de nanohy ny asany ihany izy ireo ka vita ny rindrimbe ary miroso amin’ny fanotorana ranontany izy ireo ankehitriny.
Araka ny fanazavana voaray nandritra ny fanadihadiana natao dia manimba ny tontolo iainana ny fananganana fotodrafitrasa amin’io toerana misy honko io. Ahiana ny mety hahatondra-drano ny manodidina eny raha miakatra ny ranomasina na samonta araka ny fomba fiteny. Efa samy naneho sy namoaka ny didy hanajanona io asa io na ny avy ao amin’ny Faritra Boeny na ny avy ao amin’ny kaominina saingy tsy nisy nanaraka izany. Hentitra anefa ny fandraisana fanapahan-kevitra avy amin’ny Ben’ny tanàna fa tsy azo tohizana intsony ny asa eny an-toerana.
Andrasana koa araka izany ny mety ho fandraisan’ny avy ao amin’ny prefektiora an-tanana ny fanapahan-kevitra manoloana ity raharaha ity.